गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » विश्वकै नम्बर वान सुन्दरी अभिनेत्री किन अब चुकाउने मूल्य केही बाँकी नरहेको महसुस गर्दैछिन् !
काठमाडौं । विश्वभर चर्चामा आएकी हलिउड अभिनेत्री एम्बर हर्ड एउटा किताब लेख्न लागेकी छिन् ।
यस पुस्तकमा उनले आफ्नो जीवनको बारेमा लेख्ने छिन् । उनको नजिकको स्रोतको रिपोर्ट अनुसार एम्बर हर्डले हलिउडमा आफ्नो करियर समाप्त भएको महसुस गरिन् । उनीसँग अब गुमाउनको लागि केहि पनि छैन ।
जोनी डेप र एम्बर हर्ड बिच चलिरहेको मानहानि मुद्दामा फैसला जुन १, २०२२ मा आएको थियो ।
अमेरिका, भर्जिनियाको एक अदालतको जूरीले वाशिङ्गटन पोस्टमा एम्बरको लेखबाट जोनीको सार्वजनिक छविमा चोट पुगेको भन्दै मुद्दा दायर भयो । त्यसका लागि उनले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
मुद्दा हारेपछि हर्डले एनबीसी न्यूजलाई अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । त्यो अन्तर्वार्तामा उनले आफूले लेखेको त्यो लेख जोनीको बारेमा नभएको बताइन् । उनले ठूलो ‘सांस्कृतिक संवाद’ मा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरेको जानकारी गराएकी छिन् ।
‘सांस्कृतिक कुराकानी’ हर्डले कुरा गरिरहेको छिन् त्यो मीटु आन्दोलन थियो । लेख लेख्दा धेरै हंगामा भयो, किताब लेखे भने के होला ! इन्डिया टुडेको रिपोर्ट अनुसार ओके म्यागजिनसँगको कुराकानीमा एम्बरको नजिकको स्रोतले भन्यो, ‘एम्बरले हलिउडमा आफ्नो करियर समाप्त भएको ठान्छिन् । picture credit : Amber Heard Instagram Account
उनी आफ्नो पुस्तकलाई लिएर उत्साहित छिन् । उनीसँग वर्तमान समयमा गुमाउनका लागि केहि छैन । उनी सबै कुरा बताउन चाहन्छिन् । तर, सबैलाई सबै कुरा बताउँदा उनी निकै होसियार हुनुपर्छ ।’
न्यु योर्कका वकिल र लेखक ड्रर बिकलले एम्बरलाई सावधानीपूर्वक पुस्तक लेख्न चेतावनी दिएका छन् । किनभने जोनी डेपका वकिलहरूले सबै कुरा पढेर समीक्षा गर्नेछन् । डेप र उनका वकिलहरूले सबै कुराहरू पढ्ने छन् ।
यदि उनले रेखा पार गरिन् भने उनको मुस्किल बढ्न सक्छ । त्यसपछि अर्को मानहानि मुद्दा दायर हुन सक्ने कुरा पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । पुस्तकका कारण एम्बर पुनः कठघरामा उभिनुपर्नेछ ।
केही समयअघि एम्बरका वकिलहरूले नै एम्बरका लागि जोनलाई क्षतिपूर्ति तिर्न निकै गाह्रो भएको बताएका थिए । उनीसँग क्षतिपूर्ति दिने पैसा छैन । केही मानिसहरू विश्वास गर्छन्, मल्टी–मिलियन पुस्तक सम्झौताले उनलाई आर्थिक रुपमा मद्दत गर्न सक्छ।